Ike | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Dị ka akụkọ ifo oge ochie si kwuo, rosemary na-achụpụ mmụọ ọjọọ, na-adọta ụba na akụnụba. Ma taa, a na-asọpụrụ osisi ahụ maka nnukwu ndepụta nke uru bara uru ndị a na-eji na ọgwụgwọ na igbochi ọrịa. Ọ chọpụtala ebe ọ na-emepụta ihe na nri. Ihe mejupụtara na ihe bara uru nke rosemary - Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka uru ahụ bara uru, mgbe ahụ, otu tablespoon nke rosemary nwere 1% nke nri mmadụ na-eri kwa ụbọchị nke vitamin A.
Nri na mmiri ara ehi Tibet (kefir ero): ngwongwo chemical, ojiji na ọgwụgwọ
Egwu na-adịghị mma dị ka ndị na-ebibu n'oké ọhịa. Ọ bụ ihe na-acha ọcha na-agbanwe agbanwe (ọkụ dị n'elu mmiri ara ehi) nke dị ka kọlịflawa. Ngwurugwu kefir na-aba uru, oleekwa otu esi eme ya? Akụkọ ihe mere eme Ọbụna n'oge ochie, ndị mọnk Tibet hụrụ na mmiri ara ehi a na-eme ka mmiri gwakọtara n'ime ite ụrọ na-emegharị ka ọ dị n 'ụzọ dị iche iche.
Otu esi emefu oge oyi na izute mmiri, ma ọ bụ usoro nchịkọta asaa kacha mma maka pancakes maka Shrove Tuesday
Na oge a, Maslenitsa na-eme ememe ọ bụghị dị ka ọ dị n'oge ndị nne ochie anyị, mana n'otu oge ahụ, ajụjụ ịme nri na-atọ ụtọ na pancakes ababeghịrị mkpa ya. Ọ bụ ya mere anyị ji kọwaa nchịkọta anụ ọhịa asaa na-ewu ewu nke ga-aba uru n'oge izu dum, ma ka anyị buru ụzọ mee ka akụkọ ihe mere eme.
Esi esi esi nri marinade maka nku n'elu ihe ndozi, akwukwo isii
Crispy, sweetly, soft and delicious meat e ghere eghe na icheku ọkụ ... Foto dị otú ahụ na-eme ka ị na-ejikarị mmiri, ma ọ bụrụ na ị gbakwunye nkọwa nke mbụ a na-esi ísì ụtọ pụrụ iche nke na-emepụta herbs na marinade ahụ, ịchọrọ ịhapụ ebe ahụ ma mee ngwa ngwa gaa ụlọ ahịa maka anụ ọhụrụ , na-ebute ma na-atụba ngwa ngwa na nke a.
Kedu esi eto balsamine n'ubi
Hortensia paniculata iche
Njikwa dị mma nke beps
Ụdị tomato kachasị mma maka Siberia
Otu esi echekwa anu na oyi n'oge obibi
Uru na nsogbu nke pasili efere maka ezinụlọ dum, yana ịkwadebe nri maka oge dị iche iche
Idem ama ọfiọk ke eto emi ẹdude enye - "N̄kpọ";
Na-eto eto n'ebe ugwu ga-adaba na tomato "Kpochapu F1": nkọwa na mkpụrụ nke iche iche